स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्दै देउवा, शशांक कोइराला उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ? - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्दै देउवा, शशांक कोइराला उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ?
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्रिपपिरषद् विस्तार नुहँदा आलोचना बढ्न थालेपछि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका हुन्।
देश कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको र पछिल्लो समय संक्रमण समेत बढ्न थालेको अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्रालयले नेतृत्व नपाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सोही कारण देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन्।
अबको केही दिनमै सरकारले पूर्णता पाउने कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन्। सरकारलाई केही दिनमै पूर्णता दिने तयारीमा देउवा छन्। तर, गठबन्धनमा सहमति हुन नसके स्वास्थ्य र परराष्ट्रमन्त्री भने तत्काल नियुक्त गर्ने तयारी देउवाको छ।
तर, अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय कसले हाँक्ने भनेर टुंगो लागेको छैन। सरकार गठन हुने बेला गगन थापाको चर्चा थियो। तर, अहिले गगन मन्त्री नबन्ने सम्भावना धेरै रहेको स्रोतको दावी छ।
कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा इच्छा राखेको बताइन्छ।